ကောင်းမွန်ဝင်း: ဂျပန်နိုင်ငံ ၄၅ကြိမ်မြောက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ
ကိုရီးယားလူမျိုးဘလောက်ဂါတစ်ယောက်ရေးတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. ၄၅ကြိမ်မြောက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် ထားရှိတဲ. သူ.ရဲ. သဘောထားအမြင်
------ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. “အစိုးရရွေးချယ်မှု” အတွက် အဓိကအရေးပါတဲ. ၄၅ကြိမ်မြောက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးမှုကို ၂၀၀၉ခုနှစ် ၃၀ရက်(တနင်္ဂနွေနေ.) မနက်၇နာရီတိတိမှာ စတင်ခဲ.ပါတယ်။ မဲအနိုင်အရှုံး ကို နေ.ချင်းကြေငြာမှုစံနစ်နဲ. ၂၀၀၉ခုနှစ် ၃၁(တနင်္လာနေ.)ရက်နေ. မနက်၁နာရီမှာလောက်မှာ သတ်မှတ်မဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ. ရွေးချယ်ခံရသူပါတီ အနိုင်အရှုံးးစာရင်းကိုသိရမှာဖြစ်ပြီး၊ မနက်၃နာရီလောက်မှာတော့ ပါတီများရဲ. အမတ်လောင်းစာရင်း အပါအ၀င်၊ အရွေးခံပါတီများရဲ. ကိုယ်စားလှယ်အရည်အတွက် အတိအကျထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲ ကို ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ အထူးစိတ်ဝင်စားပြီး၊ ၂၇ရက်နေ. နေ.စွဲနဲ. ထုတ်ဝေတဲ့ Chosun Daily New သတင်းစာမှာတော့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ် ဟာ့တိုးယာမာ့ ယူကီအို Hatoyama Yukio နဲ. ဇနီးတို. နှစ်ယောက်တွဲဓါတ်ပုံ ကို ရှေ.ဆုံးစာမျက်နှာအလယ်တည့်တည့်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ဆန္ဒမဲပေးပွဲစတာနဲ. တစ်ပြိုင်တည်းပဲ ကိုရီးယားတီဗွီသတင်းကနေ ဆန္ဒမဲပေးရာနေရာကနေ တိုက်ရိုက်ပေးပို.တဲ.သတင်းကို ထုပ်လွှင့်တာမျိုးတွေနဲ. လူတွေကိုပိုမို အာရုံစိုက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ------
ကိုရီယားလူမျိုးဘလောက်ဂါက “၃၀ရက်နေ.ကျင်းပတဲ. ၄၅ကြိမ်မြောက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နဲ.ကြုံရတာဟာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲဘယ်လိုကျင်းပတယ်ဆိုတာကို သိဘို. အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ရလိုက်တာပဲ။” လို.ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ၂၉ရက်နေ.မှာတစ်ပြည်လုံးကိုလှည့်ပြီး ထပ်ခါတစ်လည်းလည်း ကျင်းပ ခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရဲ. မဲဆွယ်မိန်.ခွန်းများကို “နောက်ဆုံး အယူခံဝင်ခြင်းများ”လို. ရေးသားထားပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာဖေါ်ပြထားတာကတော့ “ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံရဲ. အစိုးရအနေနဲ.လည်း ၊ ဒီဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲကို နည်းနမူနာယူပြီး၊ အနာဂါတ် ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံ (ကိုရီးယားနိုင်ငံ) အတွက် (ကိုရီးယား)ပြည်သူတွေကို မဲဆွယ်ရင်ကော မကောင်းဘူးလားလို.၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို အခမဲ.ဖြတ်သန်းနိုင်တာတို.၊ ခလေးသူငယ်များကို ဘယ်လိုထောက်ပံ့ကြေးပေးမယ်ဆိုတာတို.၊ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရလို ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တည်ထောင်နိုင်ရင် အဲလိုအစိုးရကို ဘယ်တိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေက မကြိုက်ပဲနေပါ့မလဲ။ အခုလိုကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ. အစိုးရကတောင် နောက်ထပ်ကောင်းသထက်ကောင်းတဲ. စံနစ်ကို ပြောင်းလဲပြီး ပြည်သူလူထုထောက်ခံအောင် ကြိုးစားနေရတာကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို. အစိုးရအတွက် အရှုံးတော့ မရှိပါဘူးလေ။ ”လို. ပြောထားပါတယ်။
ဘလောက်ဂါက သူ.ရဲ့စာကို နိဂုံးချုပ်ထားပုံက “ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. အပြောင်းအလည်းတွေက ဘယ်လိုမျိုးသမိုင်း နောက် ခံတွေကစတင်ခဲ့ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုက မိမိကိုယ်တိုင် မိမိတို.ဆန္ဒအလျောက် ရွေးချယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နေရတဲ. သမိုင်းရဲ.အထောက်အထားကို နမူနာယူကာ မဝေးသောတစ်နေ.မှာ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ. ကိုရီးယားနိုင်ငံတို.ဆက်ဆံရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရည်သန်လျှက်ရှိပါတယ် ”ဆိုပြီး သူ.ရဲ.ပို.စ်ကို အဆုံးသတ် ထားပါတယ်။
searchnia,20090830 ကဖတ်ယူတဲ. သတင်းကို ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Sunday, August 30, 2009